Demodekoz - ọgwụgwọ na ihu, ọgwụ ọjọọ, ọgwụgwọ ndị mmadụ. Ụdị Demodex - Ụgha
Demodecosis - ọgwụgwọ na ihu na ihe nzuzo nke ngwangwa ngwa ngwa
Ọkụ ọkụ na ihu, ọnyá na ntutu isi nwere ike ịghọ ezigbo nsogbu maka onye nnọchianya nke ọkara ọkara mmadụ. Na pasent 15 nke ikpe, ihe kpatara mgbaàmà ndị a bụ mite nke mkpụrụ ndụ Demodex. Ichichapu ya abụghị ihe siri ike, mana ọ dị mkpa ruo ogologo oge iji mezuo iwu niile nke dọkịta ahụ ma rube isi n'iwu nke nlekọta anụahụ.
Demodecosis - gini bu?
Iji zaa ajụjụ ahụ, gịnị bụ demodacosis na otu esi emeso ya, ọ dị mfe. Ọrịa dermatological a, onye na-emepụta ihe na-akpata ya bụ mite nke mkpụrụ ndụ ihe nketa Demodex, nke bụ onye nnọchianya nke microflora mmadụ. N'okpuru ọnọdụ ndị dị mma, ọ na-adị n'ahụ mmadụ, na-enweghị ihe ndị na-adịghị mma. Ịme ka ọrụ akọrọ ahụ dị ike na-emekarị ka ọ ghara ịda mbà n'obi na mmebi nke ndabere nke ọrịa ahụ. Ndị na-enwe mmetụta dị nro, ọkụ, rụrụ arụ na nke dermatologically na-enwekarị ihe ize ndụ.
Ebe kachasị mma nke anụ a na-ebubata na abụba bara ụba. A na-enwe obi ụtọ na Demodex na mpaghara eyelids, chin, arches de superciliary, nasolabial folds, canal auditory exterior. Ihe mgbochi Demodex na ihu dị n'elu akpụkpọ ahụ ma ọ bụ naanị n'ọnọdụ ndị dị mma na-amalite ịbanye n'ime ala dị omimi, nke na-akpata nsogbu anụahụ.
Mmetụta - ụzọ nke ọrịa
Ihe mgbochi Demodex dị na akpụkpọ mmadụ na ndụ ya niile, n'emeghị ka onye nwe ya nwee nsogbu ọ bụla. Ọ na-eri ihe onye nwe ya na-eri, na-ebi na ya, ma o nweghị nsogbu ọ bụla. A na-akpọ mmekọrịta dị n'etiti akọrọ na nwoke a na-akpọ commensalism. Ka enweghi ike dochie anya mmekorita nke ndi mmadu ka ha ghara ichota ndi mmadu, ndi mmadu kwesiri igafe karia mmadu 4 n'otu onu ogugu isii ma obu otu ozo. Mgbe enwere ọnọdụ dị mma maka akọrọ ahụ, ọ na-amalite ịbawanye ụba ma mee mgbanwe na akpụkpọ ahụ.
Kedu ihe ize ndụ nke demodicosis?
Mmetụta nke eyelids na akpụkpọ anụ adịghị esite na ọrịa ndị dị ize ndụ, ma ọ bụrụ na ọrịa ahụ kpatara, nke a nwere ike iduga nnukwu nsogbu. Ndi mmadu nwere ihe ojoo na adighi nma:
Neurosis banyere ọdịdị. A na - emekarị na nwanyi ọkara nke ndị mmadụ. Ọdịdị nke ọnọdụ nrụgide na nchekasị na-eduga n'ịkụda ihe nchebe nke akụkụ ahụ na iji mee ka akọrọ ahụ ka njọ.
Ọgwụgwọ nke akpụkpọ ahụ: acha ọbara ọbara, nlezianya, itching, growths, crusts.
Akpụkpọ anụ: acne, rosacea .
Mgbe eyelids ewet: edema nke eyelids, ọka bali, nkuzi anya, njọ nke ọhụụ.
Rinofima - mmụba na imi, karịsịa na ọganihu dị elu nke ọrịa ahụ n'ime ụmụ nwoke. Nchịkọta a chọrọ ịwa ahụ, ebe ọ bụ na ọ nwere ike ịbanye na ụbụrụ ọjọọ.
Nyocha maka demodicosis
Tupu ị na-emeso demodicosis, onye na-achọ ọgwụ na-ahụ anya kwesịrị ijide n'aka na ọ bụ ọrịa kpatara akọrọ. Nkwubi okwu ikpeazụ o nwere ike inye naanị mgbe nchọpụta nyocha, nke gụnyere akụkụ ndị na-esonụ:
Nkwadebe maka nhọrọ nke ihe onwunwe. Na nyocha ime nnyocha ka a ga-akwadebe tupu oge eruo: n'ime izu ole na ole tupu nyocha ahụ a machibidoro ya iji nchacha na creams, saa ya na gel nwere nnukwu ọdịnaya nke alkali.
Nhọrọ nke ihe. Iji mụọ ihe site n'akụkụ ndị ahụ emetụtara, a na-ekpuchi ụgwọ ndị ahụ na Demodex. Ọ bụrụ na ọnya ahụ dị na mpaghara adịghị mma, mgbe ahụ, a na-ewepụ anya anya maka nyocha. Iji dokwuo anya nchoputa ahụ, ị ​​nwere ike ịchọrọ usoro nke ngwugwu ntanetị, ihe kachasị mkpa bụ nchọpụta microscopic nke teepu ntanetị, nke onye ọrịa ahụ na-emetụta anụ ahụ metụrụ n'ahụ na mgbede.
Nnyocha. Na nchọpụta microscopic a na-agụ ọnụ ọgụgụ nke onyinye kwa square centimeter nke akpụkpọ ahụ. Ọ bụrụ na achọtara mmadụ karịrị mmadụ ise na saịtị a, mgbe ahụ, a chọpụtara nchoputa nke "demodecosis".
Mgbaàmà Mgbaàmà - Mgbaàmà
Ọrịa demodekoz kewara n'ime ụdị abụọ, nke dị iche site ebe ntinye:
ụdị mkpụrụ osisi;
Ọ bụrụ na mpụ Demodex na-amụba n'ihu, ihe mgbaàmà ga-abụ:
Ajọ ọnyá nke ụdị dị iche iche, nke ọrịa ọnyá na-akpata staphylococcal nwere ike ịgbakwunye;
mmanu mmanu onwunwu akpụkpọ n'ihi oke mmepụta nke sebum;
ọ na-esiwanye ike na mgbede;
acha uhie uhie nke akpụkpọ anụ n'ihi usoro mkpali nke na-eduga na mmịnye ọbara ọbara;
mmụba nke ogo imi: a hụrụ na ọrịa ahụ dị elu.
Site n'ụdị ọrịa ahụ, e nwere ihe ịrịba ama dị otú ahụ:
akpụkpọ ụkwụ maka ịba ahụ;
ike gwụrụ anya n'ihi arụ ọrụ nke nku anya;
ọnwụ nke nku anya n'ihi ọrịa nke ciliary bọlbụ na akọrọ;
acha uhie uhie, nkuchi anya.
Demodecosis - ọgwụgwọ
Demodecosis na-ezo aka na ọrịa na-adịghị ala ala, nke a na-apụghị ịgwọta, ma ọ ga-ekwe omume iji nweta nkwenye anụ ahụ. Ọ bụrụ na ule nyocha gosipụtara na ọrịa ahụ kpatara site na mpempe Demodex, a na-eme ọgwụ anụ ahụ maka ọnwa 2-3 site n'enyemaka nke ọgwụ ndị nwere ihe ndị a:
arụmọrụ dị elu;
ikike mgbochi iwe;
disinfection nke akpụkpọ;
na-ebelata abụba nke anụ ahụ.
Demodekoz - ọgwụgwọ na ihu, nkwadebe
Mgbe a na-etinye mmanụ mmanu ọrịa site na demodecosis Physostigmine na anya tụlee Tosmilen, Armin ma ọ bụ Fosfakol. Ọ bụrụ na a chọpụtara na demodicosis, a na-agwọ ọgwụ na ihu site na enyemaka nke ndị dị otú ahụ:
Agwọ Zinc-ichthyol maka ikpochasị akpụkpọ ahụ, ihicha ya ma belata ya.
Metrogil Gel, Metroseptol na Metronidazole maka njikwa nke pathogen.
Mmanụ a na-esi ísì ụtọ maka igbochi mbufụt, na-ebelata mmeghachi omume nke nfụkasị, na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke àjà.
Shampoo Permethrin na-eji aka na-alụso arthropod ọgụ.
Demodecosis - ọgwụgwọ ndi mmadu
Ọ bụrụ na a chọtara mpempe Demodex n'ime mmadụ, ọgwụgwọ ahụ kwesịrị itinye ọgwụ ọjọọ ejikọta. Ọgwụgwọ ọdịnala pụrụ inye aka dị ukwuu n'ịlụ ọgụ. Maka ọgwụgwọ demodicosis, ị nwere ike iji ntụziaka ndị a:
Broth wormwood ilu. Iji mee ya 4 tablespoons. ihe ndị a kpụkọrọ akpụkọ na-awụnye mmiri nke mmiri esi mmiri, na-esi nri maka nkeji 5 ma na-esi ọnwụ ruo awa 3. Jiri n'ụbọchị mbụ n'ụbọchị ọ bụla (gụnyere abalị) maka ọkara otu iko, n'echi ya - otu ego kwa awa abụọ, site na 3 ruo n'ụbọchị nke 6 - awa ọ bụla.
Nlekọta na mmiri aloe. Site na nchoputa nke ọkpụkpụ ọbara, ọgwụ na ihu nwere ike ịme ya na ihe ọṅụṅụ ọhụụ ọhụrụ. Iji mee nke a, a na-etinye mmiri na akwa akwa akwa ma tinye ya na eyelids.
Ngwurugwu celandine. 300 g nke mgbọrọgwụ nke celandine na-awụnye n'ime mpempe 350 nke mmanụ na-edozi mmanụ ma tinye ìhè anyanwụ maka ụbọchị 2. Mgbe nchọtara, a na-agbanye ngwakọta n'ime akpa nwere iko gbara ọchịchịrị ma tinye ya na friji. Ọ bụrụ na achọpụta na demodicosis, a na-emezi nsogbu na ihu maka izu 3 site n'itinye ngwakọta tupu ị lakpuo ụra n'ahụ.
Miri miri emi
Ọgwụgwọ herpes n'egbugbere ọnụ n'otu ụbọchị
Esi ewepu ntụpọ ojii?
Akwụsị ezé ezé
Nri na ọnụ
Biopolymer gel na egbugbere ọnụ - na ya pụta
Ịhịa aka na Japanese site na wrinkles mgbe afọ 40 gasịrị
Obere nkuzi obere ulo
Ice maka ihu
Ọkachamara dị ọcha
Nkwalite nkwupụta okwu na agụụ
Otu mpempe aka na-agbaji - gịnị ka m kwesịrị ime?
Usoro ọzụzụ maka ndị mbido
Kedu otu esi akwadebe akwa maka galik na ọdịda?
Sneakers maka na-agba ọsọ n'oge oyi - ụdị ndị kacha mma na otu esi ahọrọ onye ziri ezi?
Kedu uru ọ dị ịgụ akwụkwọ?
Hazelnut - kụrụ ma lekọta
Endometriosis nke cervix
Mmanụ sitere na njigide n'oge ime
Agba akpụkpọ ụkwụ dị elu
Olee otú iji nọgide na-ahụ n'anya?
Osteoarthritis nke hip - mgbaàmà
Nkọpụta ihe nke cervix
Ọgwụgwọ na crusts pomegranate crusts
Katya Sambuca na-emeghị ihe